C/raxmaan C/shakuur “Somaliya kama fogga waddada Afghanistan” | Dhacdo
Home Wararka Maanta C/raxmaan C/shakuur “Somaliya kama fogga waddada Afghanistan”
C/raxmaan C/shakuur “Somaliya kama fogga waddada Afghanistan”
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa qoraal kaga hadlay is bedelka ka dhacay dalka Afghanistan.
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir ayaa sheegay ummad kasta oo aan si dhab ah u abaarin caqabadaha horgudban dowlad dhiska inay mari doonto dhabaha ay qaaday Afghanistan.
Qoraalkiisa ayaa u qornaa “Mareykanka iyo xulafadiiisa waxaa Afgaanistaan uga baxay in ku dhow labo tiliryoon oo doolar oo hanti ah, waxaa uga dhintay kummanaan askar iyo shaqaale rayid ah, iyo dhaawac intaas ka badan. Afgaanistaan waa dal ay ku lug lahaayeen quwadaha dunida ugu awoodda badan. Mareykan iyo xulafadiisa galbeedka, Shiinaha, Ruushka, Pakistaan, Iiraan, Hindiya iyo Turki.
Waxaa la oran karaa khasaaraha naf iyo hanti ee Mareykanka iyo xulafadiisa ugu kacday joogitaankooda Afgaanistaan iyo loolanka jofqraafi siyaasadeed (Geopoliticals), ayaa ka mid ah sababta ay Mareykanka iyo xulafadiisaba uga baxeen dalkaas.
Laakiin sababta ugu wayn ayaa laguu sheegay in uu yahay fashilka siyaasiyiinta iyo hoggaankii dalkaas soo maray ku dhacay. Waxay noqdeen dad danaysi, eex, musuqmaasuq, takrifal, tanaasul la’aan, aragti gaabni iyo awood maroorsi ku sifoobay. Taasi waxay sababtay in adduunku quus ka istaago dhaqanka iyo caadada siyaasiyiinta Afgaanistaan, la isagana dhex baxo.
Ummad kasta oo aan si dhab ah u wajihin caqabadaha ku horgudban dowlad dhiska, runta iskaga sheegin xaaladda ay ku sugan tahay, waxay mari doontaa waddada Afgaanistaan. Somaliya kuwaas kama fogga.
Galbeedka markii ay ku guuleysteen dagaalkii qaboobaa waxay noqdeen awoodda keli ah ee dunida ka talisa. Waxay diideen in awood kale soo baxdo. Halista ugu wayn waxay ahayd Xoogaga Islaamiyiinta, laakiin maanta waxay isku raacsan yihiin in Shiinaha uu yahay halista ugu wayn ee hortaagan.
Shiinaha iyadoo Pakistaan dhexmaraysa ayay xiriir dhow la lahayd Taalibaan. Pakistaana iyadaa sidaa ku ilaalinaysay. Waxay maalgashi xoog leh gelisay Koonfurta iyo Bartamaha Aasiya ,halka uu Mareykanku ku mashquulsanaa amniga iyo la dagaalanka argagixisada. Maanta Mareykan iyo xulufadiisa waxay uga siibteen amnigii iyo la dagalaankii argagixisada gobolkaas Shiinaha iyo quwadaha kale ee gobolka.
Waxaa jirta dood kale oo weligeed galbeedka ka dhex aloosnayd oo ahayd Islaamiyiinta ha loo daayo xukunka iyagaa la lumi doonee iyo hallaga ilaaaliyo. Doodda dambe ayaa xoog badnayd. Duruufo is biirsaday ayaa keenay in Taalibaan talada loo daayo. Tijaabada hortaalla ayaa ah ma ku guulaysan doonaan dhismaha dowlad reer Afgaan wada deeqda, nabad, horumar iyo mustaqbal wanaagsan u horseedda mise waxay ku mashquuli doonaan foodda hablaha iyo shineemooyin la xiro.
Waa jawaab maalmaha soo socda la arki doono, aniguse aad ugama rajo weyni Taalibaan iyo kuwa la halmaala.”
Previous articleDagaal-yahanada Taliban oo la wareegay Madaxtooyada Magaalada Kabul
Next articleRooble iyo Madaxda Dowlad Goboleedyada oo ku kulmaya Muqdisho